posted by Aung Aung Swe @ 12:26 PM 1 Comments
posted by Aung Aung Swe @ 3:30 AM0Comments
posted by Aung Aung Swe @ 7:57 AM0Comments
posted by Aung Aung Swe @ 9:04 AM0Comments
Myanmar iT Page apk Update Available
Facebook Syndication Error ကြောင့် သတင်းတွေ ဆက်မတက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ "Myanmar iT Page" ကိုဆက်လက်အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်များကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ ။
အခု Version အသစ်မှာ သတင်း မတက်နိုင်တဲ့ Error ကို ပြင်ဆင်ထားရုံမကပဲ .. နည်းပညာ ညီအကိုများ၏ Blog များကို ဦးစားပေးထည့်သွင်းထားသလို ၊ သတင်းဆိုင်ရာ ၊ အပြန်အလှန် စကာပြောဆိုနိုင်ရန်လဲ စီစဉ်ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် .. Myanmar iT Page version Update ကို အောက်ပါ Link များမှ အခုပင် Update လုပ်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ ။
posted by Aung Aung Swe @ 2:18 AM0Comments
ကျွန်တော် ဒီ Apk ကိုစပြီး Organize လုပ်တုန်းက Myanmar IT Pro ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ စဉ်းစားပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ . . ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ထဲက IT Pro တွေ တော်တော်များများဟာ Blog တွေ မရှိတော့တဲ့သူတွေနဲ့ .. RSS ယူလို့ မရတဲ့ Site တွေနဲ့ တစ်ချို့ ဆိုလည်း Facebook Page တောင်မတွေ့ ရပါဘူး .. ရှိပြန်တော့လည်း Update မလုပ်တာ ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီနာမည်နဲ့ လုပ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပေမယ့်လည်း Active ဖြစ်နေတဲ့ Page တော်တော်များများ ကသမ္ဘာမကျသေးတဲ့သူတွေများတာကြောင့် ဒီနာမည်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် အဆဲခံရဖို့ ပဲရှိပါတယ် .. ဒီတော့ နာမည်ပြောင်းပြီး Myanmar IT Page လို့ ပဲပေးလိုက်ရပါတယ် . . ဒီ List ထဲမှာတော့ User တွေအတွက်အဆင်ပြေပြေ Update တွေနေ့ တိုင်းတင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ဆရာသမားတွေလဲပါပါတယ် .. ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ ကန့် လန့် လိုက်တိုက်နေသလိုပါပဲ .. ပြီးတော့ ကျွန်တော် ထိပ်ဆုံးကနေရာကိုယူထားပါတယ် .. ဒါကလဲ ထိပ်တွေ အောက်တွေနဲ့ နေရာတစ်ခုကို အငြင်းမပွားစေချင်လို့ ပါ .. စိတ်ထဲကနေ အော်ဘာမှ မတတ်တဲ့ကောင်ထိပ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ List က <UL> နဲ့ စီထားမှန်းသိစေချင်လို့ ပါ.. ပြီးတော့ ဒီထဲမှာ မပါဝင်ကြတဲ့ နည်းပညာဆရာသမားတွေရဲ့ Facebook Page တွေကိုလဲတောင်းခံချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်လဲ မြင်သမျှထည့်လိုက်တာပါ .. အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ် ..
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဒီ App ထဲမှာ ဆရာတို့ ရဲ့ Post တွေကို Credit နဲ့ တကွ RSS နဲ့ ဖော်ပြပေးတာပါ. ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါဘူး .. ဒါပေမယ့် မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ဖျက်ပေးပါ့မယ်ခမျာ .. Feedback ထဲသာအကြောင်းကြားပေးလိုက်ပါ ..
အားလုံးပါဝင်ပြီး နည်းပညာကိုစုံလင်စွာချီတက်စေလိုသော ဆန္ဒနှင့် .....
Organized By အောင်အောင်ဆွေ ။
posted by Aung Aung Swe @ 3:40 PM4Comments
Name: Aung Aung Swe